Gazety Iraniàna Manangona Ireo Fanararaotana Sy Fitondra Tsy Mendrika Atao Amin’ny Ankizy Afgàna Any An-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2016 2:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Swahili, Ελληνικά, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Ny 5 Janoary 2016, notaterin'ny gazety Shargh fa nikapoka ankizy Afgàna dimy mpianatra ao aminy ny tomponandraikitry ny sekoly iray ao Damavand, fantson-drano no nampiasainy ary namela marika eny amin'ny tarehy sy ny vatan'ireo ankizy, sady narahany teny hoe: “Tokony handeha any ianareo Afgàna itony. Be loatra ianareo.”
Toerana ialofan'ny ampahany betsaka amin'ireo mpitsoa-ponenana marobe manerana izao tontolo izao i Iràna, misy 950.000 ireo Afgàna voarakitra tamin'ny 2015, araka ny voalazan'ny United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Kaomisera Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana Misahana Ireo Mpitsoa-ponenana.
Voadaroka sy noroahana avy any an-tsekoly ny ankizy Afgàna iray mpianatra tao an-tanànan'i Pakdasht noho izy tsy nahaloa saram-pianarana, araka ny tatitra vao haingana nivoaka ny 16 Janoary 2016 tao anatin'ny gazety Vaghaye Ettefaghieh.
Tamin'ny taona lasa, ankizy Afgàna efatra mpianatra amin'ny ambaratonga fototra no nosazian'ny mpampianatra avy aminà sekoly iray hafa ao Pakdasht, tamin'ny fanerena azy ireo hanatsoboka ny tànany tao anaty kabone, araka ny tatitra avy tamin'ny Tabnaknews ny 10 Febroary 2016 teo.
Tamin'ny 2011, nanambara ny lefitry ny Minisitry ny Fanabeazana momba ny raharaha iraisampirenena fa voaràra ny fisoratana anarana ho an'ireo vahiny mpianatra any amin'ireo sekoly manokana ho an'ny maranitsaina, hatramin'ny sekolim-panjakana fàka tàhaka sy ireo sekoly fiofànana momba ny asa, fanitsakitsahana ny zo iraisampirenena miantoka ny fahazoana fianarana ambony.